नेपालदृष्टि । आदरणीय शेयर सदश्य मानुभावहरु, स्नेही शुभचिन्तक मित्र तथा सहकारीकर्मी मान्यजनमित्रहरुमा साहर नमस्कारकासाँथै सवैमा न्यानो अभिवादन अर्पण गदर्छु ।
भर्खरै सहकारीमाथि भैराखेको गतिविधीको बारेमा प्रकाशित मेरा समाचार पढिदिनु भएकोमा यहाँहरुलाई धन्यवाद । हुन त त्यो मेरो बिचार संप्रेक्षण मात्र हो । त्यसमा आफु दमा्रभिट्टा साकोसको उपाध्यक्ष हुँदा कृषि शाखा बिस्तार गर्ने प्रयोजनार्थ कृषकहरुलाई मल, बीउ बिजन वितरणको लागि जिल्ला कृषि बिकाश शाखामा दर्ता गर्नलाई तत्कालै बोर्ड मिटिङ कल गराउँन असफल भै दश बाह्र दिनपछि नियमित मासिक बैठकमात्र सर्वसम्मत निर्णय गरिएको र म सहित ब्यवस्थापक संयुक्तरुपमा जिल्ला कृषि शाखा पुग्दा ठिक २४ घण्टा पहिले सहकारी बिभागबाट अव उप्रान्त सहकारीलाई कृषि समाग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम बन्द गरिएको छ, भन्ने परिपत्र देखाएकोले मैले दाम्रभिट्टा सहकारीमा गर्न नभ्याँएको काम र अर्को नम्वरमा म प्रवेश गर्दा ३७७ शेयर सदस्य मात्र भएकोमा सहकारी छोड्दा ५००० सदस्य पुह्याँउने लक्ष्यमा पुग्न असफल भएकोले आगमी कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदमा प्रत्याशी छु । आशा छ, यहाँहरुको सहयोग पाए म मेरो लक्ष्यमा अवश्य सफल हुने छु ।
कुरा रह्यो कसैको मनप्रतिको बुझाँइ । बुझ्नेको आ आफ्नो तरिका हुन्छ । कसै कसै भित्रको बुझाँईमा म बिझायो भने,म माफी माग्दछु । कुरो रह्यो फोटोको ? फोटो कसले खिचेको र कसरी त्यहाँ आयो, यसमा म पनि अनविज्ञनै छु ।
म थोरै के भन्न चाहन्छ भने : म कुनै यात्रामा थिए । संयोग कुनै महिलाले आशाको टोकरी थापिन । मैले आफ्नो हैसियत अनुसार उनको मन राखे । बास फोटो सँग मेरो यतीनै सम्वन्ध हो । तर फोटोको अर्थ विविध भईदियो । हुन तँ म महाकवि देवकोटा सम्म चाँही पुगेको होईन । तर पनि मन भने त्यति पनि निर्दही छैन । कुरा रह्यो कसैको मनप्रतिको बुझाँइ । बुझ्नेको आ- आफ्नो तरिका हुन्छ । कसै कसै भित्रको बुझाँईमा म बिझायो भने,म माफी माग्दछु । कुरो रह्यो फोटोको ? फोटो कसले खिचेको र कसरी त्यहाँ आयो, यसमा म पनि अनविज्ञनै छु । पछि समाचार पढ्दा थाँपाएको हुँ । एउटा दिन दुःखीको तस्वीर पत्रकार साँथीलाई करुण लागेछ । फेसबुकबाट उहाँले राख्नुभएछ । यहाँको बुझाँइमा असान्दर्भिक भएकोमा फेरी पनि म यहाँप्रति क्षमा याचना माग्दछु । अन्यथा नसोचिदिनुहोला । त्यस्तो केही लागेमा यो नम्वरमा ९८०४३५६४७६ र ९८६२३०२५६८ मा फोन गर्दा आवश्यक प्रत्युत्तर प्राप्त हुनेछ । धन्यवाद ।
नेपालमा ७० हजार बढी संक्रमित, ४५९ को मृत्यु
१२ सय किलोमिटर लामो मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने निर्णय
फितलो अनुगमका कारण कमजोर बन्यो सडक
आजको खेलमा नयाँ इतिहास बन्ला या इतिहास दोहारिएला ?